Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. BRENDAN ROGERS as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ireland to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
The Government of the Republic of the Union of Myanmar has agreed to the appointment of H.E. Mr. BRENDAN ROGERS as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ireland to the Republic of the Union of Myanmar, with residence in Bangkok.
Mr. BRENDAN ROGERS was born on9May 1954. He receivedaBachelor’s Degree in English, History and Geography from Trinity College, Dublin in 1975. He obtainedaMaster’s Degree in Political Science from the Boston University in 1986. He joined the Department of Foreign Affairs of Ireland as Third Secretary in May 1979 and served in the Economic Division, Anglo-Irish Division, Consulate of Ireland, Boston, Department of Protocol, and Political Division from 1979 to 1990. Afterwards, he served as the First Secretary of Political Division, Embassy of Ireland to Lusaka and Kampala from 1990 to 1998. From 2000 to 2014, he served at the Development Cooperation Division of the Department of Foreign Affairs and Trade of Ireland as Counsellor, Assistant Secretary, and Deputy Secretary. Since November 2014, he has been serving as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ireland to Thailand.
မစ္စတာ ဘရီဒန် ရိုဂျာ(စ်)အား ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရက သဘောတူ ပြီးဖြစ်ပါသည်။
မစ္စတာ ဘရီဒန် ရိုဂျာ(စ်) အား ၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ ‌မေလ ၉ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် ဒပ်ဘလင်မြို့ရှိ ထရီနီတီ ကောလိပ်မှ အင်္ဂလိပ်၊ သမိုင်း၊ ပထဝီဘာသာရပ်တို့ဖြင့် ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ မဟာဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။ မစ္စတာ ဘရီဒန် ရိုဂျာ(စ်)သည် ၁၉၇၉ ခုနှစ်၊ မေလမှစ၍ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနတွင် တတိယအတွင်းဝန်ရာထူးဖြင့် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၉ မှ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အထိ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ စီးပွားရေးဌာန၊ အင်ဂလို-အိုင်းရစ်(ရှ်) ဌာန၊ ဘောစတွန်မြို့ရှိ အိုင်ယာလန် ကောင်စစ်ဝန်ရုံး၊ သံတမန်ရေးရာဌာနနှင့် နိုင်ငံရေးရာဌာနတို့တွင် တတိယအတွင်းဝန် ရာထူးဖြင့်လည်းကောင်း၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အထိ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံရေးရာဌာနနှင့် လူဆာကာနှင့် ကမ်ပါလာရှိ အိုင်ယာလန်သံရုံး များတွင် ပထမအတွင်းဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဌာန၌ သံမှူး၊ လက်ထောက်အတွင်းဝန်နှင့် ဒုတိယ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်အဖြစ်လည်းကောင်း ရာထူးတာဝန်များ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလမှ ယခုအချိန်အထိ ဗန်ကောက်မြို့အခြေစိုက် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိုင်ယာလန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်